Wiricheya Yekugadzirisa Zvishandiso zvekuchengetedza zvenguva dzose | KarmanHealthcare.com
musha / Chinyorwa Wiricheya / Wiricheya Zvishongedzo / Maturusi Ekugadzirisa
Wiricheya Yekugadzirisa Maturusi
Wiricheya Yekugadzirisa Zvishandiso zvemawiricheya ese OEM uye kutsiva
Iko kazhinji kune akawanda marudzi e Wiricheya Yekugadzirisa Maturusi aripo. Mazhinji acho ndeepasi rese uye anogona kushandiswa kune akawanda mabhureki uye mamodheru. Dzimwe nguva wiricheya inouya navo kuitira kuti iwe ugone kuishandisa kunze kwebhokisi. Paunenge uchitenga wiricheya, kazhinji kazhinji sarudzo yakanaka kutenga neiyo inouya nayo kunze kwebhokisi.
Ese mawiricheya akanaka ane torque specs uye kunyange bhaudhi yesimbi harndess specs. Kazhinji iri mukudhindwa kweHRC pane simbi. Nenzira iyi chero chinhu chekubatisa chinoshandiswa kudzikisira pasi kana bhaudhi kuchigaro chakatotsanangurwa. Injiniya yekumashure inoda kupedza iyo dhiramu bvunzo iyo inomiririra kumhanya cheya mune yehupenyu nguva bvunzo. Ese FDA anodzora mawiricheya muUSA anofanira kupfuura aya bvunzo. Chenjera zvigaro zvisingaenderane nemitemo yemubatanidzwa.
Kuwana chairo Wiricheya Yekugadzirisa Zvishandiso zvewiricheya yako
Chikonzero nei kuwana chaiyo chaiyo yewiricheya yako kwakakosha. Chigaro chega chega chakagadzirwa zvakasiyana. Kubva pakukorobha ma casters ako kana kurongedza zvekare mabheyari ako, ita shuwa kuti iwe unoteedzera izvo zveOEM zvirevo kana iwe uchida kuita yako wheelchair kuti igare kana kuita seyatsva. Kubva pakushandisa sikuruwa kuchinjisa bhatiri. Nguva dzose zvakanaka kutenga OEM. Zvakanakisisa kutevera zvazvakatogadzirwa pakutanga. Kunyangwe mumapurasitiki, phalates uye hunhu hunopinda mune rakanyatsogadzirwa mhando. Dzivisa kugogodza. Ivo havana iyo R&D bhajeti uye mainjiniya kana warandi yekuidzosera.
Asi usazvidya moyo, tauya kuzobatsira. Ingo fona, mameseji, kana email isu uye tipe iwe yako yemhando nhamba uye serial nhamba. Tichakwanisa kukupa iyo chaiyo Wiricheya Yekugadzirisa Zvishandiso iwe zvauri kutsvaga. Sezvauri kuona, kuwana chairo Mawiricheya Ekugadzirisa Maturu ewheelchair yako kwakanyanya kukosha.